मेलम्चीमा एक्कासि भयंकर बाढी कसरी आयो ? सेनाले पत्ता लगायो यस्तो तथ्य ! - Media Dabali
काठमाडौं – लगातार प्राकृतिक विपत्ति भोगिरहेको सिन्धुपाल्चोकमा मनसुन सुरू भएको पहिलो दिन नै प्राकृतिक विपत्तिबाट ठूलो जनधनको क्षति हुन पुगेको छ ।
२०७१ सालदेखि लगातार प्राकृतिक विपत्तिको सामना गर्दै आएको सिन्धुपाल्चोकले असार १ गते नै ठूलो विपत्तिको सामना गरेको छ ।
मंगलवार साँझ हेलम्बु गाउँपालिकाको बखानमा ठूलो पहिरो गएपछि मेलम्ची नदी थुनिएको थियो । थुनिएको नदी खुलेपछि नदीले विनाश रुप धारण गर्दै क्षति पुर्‍याएको छ ।
‘मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको अम्बाथानमा रहेको ड्यामभन्दा माथिबाट आएको पहिरोले मेलम्ची नदी थुनेको देखियो,’ हेलिकोप्टरबाट पहिरो स्थलमा पुगेका नेपाली सेना गोरख बक्स गणका प्रमुख निर्मलकुमार श्रेष्ठले भने, ‘त्यही पहिरोले नै तल्लो तटीय क्षेत्रमा क्षति भएको देखियो ।’
पहिरोपछि आएको बाढीले मानवीय क्षतिको यकिन विवरण प्राप्त नभए पनि केही बेपत्ता छन् । ७ जनाको शव भेटिएको छ । हेलम्बु–२ का माधव भण्डारी, गणेश ज्योति, हेलम्बु–३ की टिकामाया खड्का, हेलम्बु–६ का च्यामा तामाङ, उनकी पत्नी, हेलम्बु–७ का ज्ञानेन्द्र कक्षपति र सुरेन्द्र नेपालको मेलम्चीको बाढीमा परेर निधन भएको छ ।
उनीहरू सबै ट्राउट माछा फार्ममा काम गर्नेहरू रहेका सिन्धुपाल्चोकका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी बाबुराम खनालले बताए । ‘बखान क्षेत्रमा गएको पहिरो हेर्दा अन्य पहिरोभन्दा फरक देखिएको छ । लाभा जस्तै बगिहेको छ, ठूलो ज्वालामुखी विस्फोटनपछि निस्कने लाभाजस्तै लेदो बगिरहेको छ,’ सेनानी श्रेष्ठले भने, ‘यस्तो प्रकृतिको पहिरो यसअघि देखिएको नै थिएन ।’
अहिले पनि पहिरो झर्न नरोकिएको र लेदो पनि बगिरहेको उनले बताए । ‘माथि हिमाल नै फुटेर आएको जस्तो अवस्था छ, लेदोले नदीको सतह २ मिटरभन्दा अग्लो भएको छ,’ प्रमुख सेनानी श्रेष्ठले भने । पानीसँगै बाक्लो घोल आएर नदी छेउछाउका घरमा पसेर क्षति बनाएको रेडियो मेलम्चीका स्टेसन म्यानेजर देवराज सुवेदीले बताएका छन् ।
पहिरो र त्यसपछि आएको बाढीले ईन्द्रावती र मेलम्ची नदीमाथि रहेका ४ वटा पक्की पुल बगाएको छ । पुल मात्रै होइन, नदीले मेलम्ची हेलम्बु सडकखण्ड पनि पूरै कटान गरेको छ । मेलम्चीलाई सदरमुकाम चौतारासँग जोड्ने पक्की पुल बाढीले बगाएको छ भने मेलम्ची र दुवाचौर जोड्ने अर्काे पुल पनि बगाएको छ । ‘मेलम्चीमाथि हेलम्बुसम्म जति पनि पक्की र झोलुङे पुल छ, त्यो सबै नै बगाएको छ,’ नेपाली सेना गोरख बक्स गणका प्रमुख निर्मलकुमार श्रेष्ठले भने ।
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको मुहानस्थल हेलम्बुको अम्बाथनदेखि मेलम्ची बजारसम्म बाढीले ३ सय बढी घरमा क्षति पुर्‍याएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) अरुण पोखरेलका अनुसार मेलम्ची नगरपालिका भित्रका १३३ र हेलम्बु गाउँपालिकाभित्र १५० घरमा प्रारम्भिक रुपमा क्षति भएको विवरण प्राप्त भएको बताए ।
बाढीबाट विस्थापितलाई मेलम्चीस्थित ईन्द्रेश्वरी माविमा र हेलम्बु क्षेत्रका स्थानीयलाई पनि डाँडाका सुरक्षित स्थानमा राखिएको उनले बताए । मेलम्ची नदी किनारमा ट्राउट माछापालन गर्ने व्यवसायीलाई बाढीले नराम्रोसँग झट्का दिएको छ । नदी छेउमा रहेको एउटा पनि ट्राउट माछा फर्म नराखी बाढीले बगाएको छ ।
अविरल वर्षाका कारण सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बुमा आएको बाढीले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको क्याम्प बगाएपछि अलपत्र परेका ४७ जना कामदारको उद्धार गरिएको छ ।
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको आम्बाथान मुहान नजिकैको क्याम्पमा बस्ने ७० जना कामदार तथा आयोजनाका कर्मचारीलाई नेपाली सेनाले उद्धार गरेको छ । बाढीमा फेसका ४७ जना कामदारलाई नेपाली सेना तथा निजी कम्पनीको हेलिकोप्टरबाट उद्धार गरी धुलिखेल अस्पतालमा राखिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी अरुण पोखरेलले बताए ।
मंगलवार राति आएको बाढीले कामदार बसेको क्याम्प बगाएको थियो । केही कामदार भागेर ज्यान जोगाउन सफल भए भने अन्य सम्पर्कविहीन छन् । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको हेडवक्र्स निर्माण कार्य भइरहेकाले नेपाली, चिनियाँ र भारतीय तथा आयोजनाका कर्मचारीसहित ७० जना कार्यरत रहेका थिए ।
बाढीमा फसेकाको खोजी तथा उद्धार कार्य भइरहेको जनाइएको छ । आयोजनाको कर्मचारी मजदुरको उद्धारमा मेलम्ची खानेपानी आयोजना, निर्माण व्यवसायी, परामर्शदाता खटिरहेको र बेपत्ताको खोजी भइरहेको मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले जानकारी दिएको छ ।
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका २३ कर्मचारी र मजदुर अझै सम्र्पकविहीन रहेको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले जनाएको छ । बाढीले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको ड्याममा क्षति बनाए पनि सुरुङको गेट बन्द गरिएकाले सुरुङमा भने क्षति नभएको खानेपानी आयोजनाले जनाएको छ । आजको राजधानी दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ ।
सेनाका एक जर्नेल सहित तीन अधिकारीको गयो जागिर, के हो कारण?
प्रधानसेनापति थापा पनि क्वारेन्टाइनमा
विप्लव माओवादीविरुद्ध एक्सनमा उत्रिन सेनालाई निर्देशन
प्रधानसेनापतिले देशभरका प्रमुखलाई दिए यस्तो निर्देशन, बढ्यो सुरक्षा चुनौती !
आज राति बख्तरबन्दसहित नेपाली सेना काठमाडौंका सडकमा निस्किने, यस्तो छ तयारी
सोमवार, माघ १९ २०७७०६:२३:४७